Izizathu ezi-3 zokuba ndibambe iWebinar yam nge-ReadyTalk | Martech Zone
Ndaqala ukwaziswa ReadyTalk emva kokuba i-webinar inyibilika kunye neGoToWebinar. Ndineendwendwe ezi-3 kumboniso ovela eDenver, eSan Francisco naseLondon. Ngaphezulu kwama-200 abaguli kunye nababekho abanomdla baxhonywe apho njengoko sijongana nokulibaziseka komsindo kunye nokubonakalayo. Ke kuye kwafuneka ndifumane umboneleli onesibonelelo esifanelekileyo sokuxhasa iimfuno zabo babekho kunye nababekho. Yilapho i-ReadyTalk ihamba phambili.
Amava enkcazo: I-ReadyTalk Webinar inelayini ezinikezelweyo kubasasazi abasasazwa kumgca wokuzimasa. Oku kuvumela ukuba bazibandakanye nabanye ngaphandle kokulibaziseka ixesha elide ngenxa yomgca oxineneyo. Izilayidi zinokulayishwa kwiseva ye ReadyTalk ukuze nawuphi na umbonisi ahambise isilayidi.
Uncedo loMqhubi: Ukuba uza kuba nenani elikhulu labantu abazokuzimasa, i-ReadyTalk inokubonelela ngoncedo lomqhubi. Lo mqhubi uphendula kwizicelo zenkxaso yobuchwephesha evela kubaphulaphuli. Oku kunceda ukuhlangabezana neemfuno ezikhawulezileyo zabaphulaphuli ngaphandle kokuphazamisa ukuhamba kwencoko kunye nabasasazi.
Ukurekhoda ngokulula kunye nokuHlela: I-ReadyTalk ikunika ukufikelela urekhodo ngokukhawuleza emva komsitho kwaye yakhelwe kumhleli ekuvumela ukuba ukhawuleze usike i-webinar yakho kwaye ungene kwiwebhusayithi yakho. I-ReadyTalk isebenzisa ifomathi esemgangathweni ukurekhoda i-webinar yakho. Oku kuthetha ukuba awuyi kuchitha iiyure uguqula ifomathi yevidiyo ibe yinto onokuyisebenzisa (Ukuba ukhe waya esiphelweni sokuhlela sewebhu, uyazi ukuba ligcina ixesha elingakanani)
Ukusuka kumbono wentengiso, i ReadyTalk sikhokelo kunye API Yomelele kwaye ikulungele ukudityaniswa. Kwi ukuzenzekela ngokuzenzekelayoUkwenza amanqaku njengee-webinars kubalulekile kuba isenzo esinje sinokuba nefuthe elikhulu ekubeni ingaba undwendwe lunokuba ngumthengi.
Iimpawu zethu zichaphazeleka ngamava esiwanika amathemba ethu kunye nabathengi. Kubalulekile ukuba nentembelo kwitekhnoloji esiyisebenzisayo ukuhambisa umxholo osinyanzelayo esisebenza nzima ukwenza. Owu ... kwaye ukuba oko akonelanga, iqonga le ReadyTalk liyadibana ne lesforce:
Kananjalo kunye Eloqua:
tags: eloquaimvubdiUkuthengisa iWebinarsekulungileisilungiso apiukuthengisa
UIsaac Pellerin nguMarker Revenue kwiTinderBox, iSoftware njengeNkonzo eyenza kube lula ukuyila, ukulawula, kunye nokulandela umkhondo wezindululo. Uyalithanda ibali elilungileyo kwaye uyakonwabela ukusebenza ukuphucula indlela iinkampani ezibandakanya ngayo amathemba kunye nabathengi. Ukholelwa ukuba ukuthengisa kunye nentengiso zezona zilungileyo xa babelane ngeenjongo kunye neetriki.
Amashishini amancinci asebenzisa njani iMidiya yokuNxibelelana